Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad | Soo-saareyaasha Alaabada Shiinaha
Abrasives dahaarka leh
Qalabka Kaabayaasha ah
[Nuqul] Suunka dhoobada dhoobada ah
Suunka dhoobada dhoobada ah
Brown suunka alumina la isku daray
Wareegga dhexe ee diiqadda
Potassium fluoborate waa budo cad oo cad. Xoogaa ku milma biyaha, ethanol iyo ether, laakiin laguma baabi'in karo xalalka alkaline. Cufnaanta qaraabada (d20) waa 2.498. Barta dhalaalida: 530℃ (burburka)
Waqtigan xaadirka ah, Yousheng wuxuu sidoo kale maal galiyay xoog cusub oo lagu horumarinayo dharka warshadaha. Si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka, waxay maalgelin cusub ku sameysay wareegga giraanta iyo qalabka wareejinta furan. Shirkadda''s waxyaabaha keena waxay leeyihiin dhowr taxane ah: dhammaan dharka cudbudda warshadaha, dharka warshadaha oo dhan-polyester, caag-warshad caag ah, iwm Wax soosaarka ugu muhiimsan badanaa waxay ku habboon yihiin dharka dhabarka dambe ee Emery.
Cryolite waa budo cad oo cad. Xoogaa ku milma biyaha, oo leh cufnaanta 2.95-3.0, iyo barta dhalaalida ee qiyaastii 1000 ° C. Way fududahay in la dhuuqo qoyaanka waxaana ku qudhmi kara asiidhyo adag sida sulfuric acid iyo hydrochloric acid si loo sameeyo aluminium iyo cusbada cusbada u dhiganta.
Zirconium corundum waxaa lagu dhalaaliyaa heerkul sarre ah foornada qaanso koronto leh oo leh ciid zircon oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Waxay leedahay qaab adag, qaab dhismeed is haysta, xoog sare iyo shoog kuleyl wanaagsan. Maadado ahaan, waxay soo saari kartaa wax-qabad sare oo giraangiraha culus ee culus, kuwaas oo leh saameyn wax ku ool ah oo ku saabsan qaybaha birta, birta, birta kuleylka u adkaysata, iyo qalabka isku-dhafan ee kala duwan; Intaa waxaa dheer, zirconium corundum sidoo kale waa alaab ceyriin ah oo diidan. Waa shey ku habboon waxqabadka sare ee nozzles slits iyo nozzles immersion. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sameeyo lebenka loo yaqaan 'zirconium corundum lebis' ee foornooyinka dhalaalida dhalada.
[Nuqul] Zirconia Alumina
Waxyaabaha Lagu Sameeyo Ceramic
Maaddada dhoobada ah ayaa laga sameeyaa alumina gaar ah oo ah maaddada ugu weyn, oo lagu qaso noocyo kala duwan oo naadir ah oo wax laga beddelay dhulka, waxaana lagu kala qaadaa heerkul sarreeya. Waxay leedahay adkaansho sare iyo is-fiiqid. Yousheng wuxuu ku tiirsan yahay fikradda gaarka ah ee shiidi wuxuuna ku darayaa kiimiko gaar ah si loo sameeyo dhoobada dhoobada oo leh astaamaha goynta qabow. Mashiinka dhoobada dhoobada ah ayaa ilaalin kara xoog wax shiidi kara muddo dheer, sidaa darteed qalabka wax lagu nadiifiyo ee la sameeyay wuxuu gaari karaa nolol aad u dheer. Abrasive wuxuu leeyahay kala duwanaansho codsi aad u ballaaran, oo loo isticmaali karo tuurista iyo xoqidda cadaadiska sare, iyo si fiican u shiidi alaabooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin qalabka wax lagu shiido, shiidaha wax lagu shiido, shiidiida crankshaft iyo kuwa kale.
Astaamaha wax soo saarka: tiknoolajiyad cusub, is-xoqid wanaagsan, shiidid fiiqan, caabbinta heerkulka sare, adkaanta sare, waxtarka sare oo aan fududayn in la xidho, dheeman isku mid ah iyo ciid, shaqo-wanaag, nabadgelyo iyo ilaalin deegaan, jeexitaan siman oo aan la jarjarin iyo faa'iidooyin kale .
Alaabtu badiyaa waxay ku habboon yihiin: dhammaan noocyada birta iyo kuwa aan birta ahayn, birta shiidan ee birta tungsten, goynta mashiinnada wax lagu shiido, alloysyada, dheemanka, dhalooyinka, dhoobada, qalabka semiconductor (silikoon carbide, iwm), qalabka magnetka qalabka birta, iwm.)
[Nuqul] Gawaarida dheemman ee dheemman
Nalalka alumina ee tayo sare leh iyo walxaha la isku qurxiyo ayaa kulul la cadaadiyaa.
Astaamaha wax soo saarka: badbaadada alaabada, waxtarka sare, saxsanaanta sare, xirnaasho badan, xasiloon oo raagaya, oo leh astaamaha u adkaysiga duufaanka sare, caabbinta saameynta, foorarsiga iska caabinta, xawaaraha xawaareynta degdega ah, shiidiida siman, nolosha dheer, iwm
Shayga waxaa inta badan loo isticmaalaa: shiidi, ka saarida miridhku, qiraan, birta shiidi, alxanka shiid alxanka, alxanka alxanka chamfering, iyo derusting dusha.
Dheemanka iyo xabagta cusbada ayaa si kulul loo cadaadiyey si alaabta loo sameeyo.
Giraangir dheemman dheemman
Dhinaca tiknoolajiyada sifaynta, Yousheng wuxuu soo saaray cajalado cusub oo xoqan, oo ay ku jiraan warqadda ciida iyo jidhka jilicsan, labadoodana waa la marshay oo waa la isku daray. Cajaladda Velcro ee saxaaradda ku dheggan waxaa ku dheggan jirka dhogorta, taas oo ay fududahay in la soo ururiyo lana isticmaalo. Marka la barbardhigo badeecada wax lagu nadiifiyo ee caadiga ah, astaamaha ugu muhiimsan ee saxanka bacaadka ayaa ah inay nuugi karto boodhka iyo budada ku soo baxa geedi socodka hawsha waqtiga, hagaajinta saxsanaanta hawsha, isla markaana yareynaya boodhka iyo budada duulaya. Ka sokow, waxay leedahay ilaalinta deegaanka oo wanaagsan. Astaamahan oo dhami waxay si fiican u hagaajin karaan jawiga shaqada.
Corundum brown, corundum calcined, iyo zirconium corundum louvre waxyaabaha:
Corundum Brown, corundum calcined, iyo zirconium corundum louvres ayaa la isku weydaarsi karaa shaagagga miisaska leh ee milix leh. Waxay leeyihiin dabacsanaan xoog leh, iska caabin adag oo foojignaan ah, iska caabin foorarsi ah, is-fiiqid wanaagsan, heerka shiididda sare, iyo buuq hooseeya. Waxay ku habboon tahay nadiifinta iyo nadiifinta birta, birta, birta birta ah, birta birta ah, aluminium, alwaax, caag iyo waxyaabo kale oo aan bir ahayn.
Deegaanka u fiican-cajaladda ciidda isku-dhafan ee nooca 28 ah:
Qalabka isku-dhafka bey'adda u habboon ee isku-dhafan ee 28 ayaa laga sameeyaa maro emery gaar ah oo ku xidhan substrate bey'ad u fiican. Qalabka jawiga ku habboon ee SG (super green) maqaarka lagu xoqdo waxaa lagu gartaa badbaado sare iyo dabacsanaan wanaagsan; maro Emery iyo substrate labaduba waa kuwo deegaanka u fiican. Maaddada waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo kuuskuusyada alxanka iyo rinjiga meelaha maraakiibta, gawaarida iyo diyaaradaha.